Ethiopia Latsaka An-Katerena : ‘Pikantsary Farany Ho An’ny Fitondrana Tsy Refesimandidy Mahery Setra’? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2016 7:05 GMT
Nanambara ny hamehana mandritra ny enimbolana ny Filankevitry ny Minisitra Ethiopiana taorian'ny hetsi-panoherana ny governemanta maromaro nahafatesan'olona tao amin'ny faritra Oromia sy Amhara , fihetsika izay nolazain'ireo Etiopiana sasany an-tserasera ho toy ny mampidi-doza sy mahakivy.
Nisy fihetsiketsehana tsy tapaka tao Oromia nanomboka tamin'ny Novambra 2015. Nanomboka izany tany am-boalohany ho setrin'ny drafitry ny governemanta mba hanitarana ny renivohitra Addis-Abeba any amin'ny manodidina ny toeram-pambolena any Oromia . Fa tsy ela anefa dia nivelatra ny hetsi-panoherana hitakiana fizakan-tena bebe kokoa, fahafahana sy fanajana ny mari-panondroana ara-pokon'ny vahoaka Oromo izay efa niaina rafitra fanilikilihana sy fanenjehana tao anatin'ny 25 taona farany.
Nampiasa hery nahafatesan'olona tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny manampahefana. Olona 52 no maty vao haingana raha kely indrindra tao amin'ny fivoriana fanatontosana ny fety Irreecha tao Oromia, rehefa nitifitra baomba mandatsa-dranomaso sy bala tena izy ny mpitandro ny filaminana ka niteraka fifanosehana hitsoaka.
Niaraka tamin'ny fotoan'ny fanakatonana ny tolotra aterineto rehetra tamin'ny finday naharitra fito andro fara fahakeliny ny fanambarana ny hamehana tao amin'ny firenena. Niantehitra tamin'ny media sosialy ny hetsika mba handaminana ny hetsi-panoherana sy hitondra hafatra ho an'ny mpijery iraisampirenena.
Nohelohina hatraiza hatraiza ny hamehana. Nangataka ny governemanta Ethiopiana mba hampitsahatra ny fampiasana ny hamehana ho antony ahatongavana amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena ny Fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ao Ethiopia. Na izany aza, nilaza ny Praiminisitra Ethiopiana Hailemariam Desalegn fa “Tsy hanitsakitsaka ny zon'olombelona fototra nosoratana tao amin'ny lalàm-panorenana Etiopiana, ary tsy hisy fiantraikany ihany koa eo amin'ny zo diplomatika voatanisa tao amin'ny Dinan'i Viena” ny hamehana.
Fantatsika rehetra ny dikan'ny hoe #Hamehana, Tandindonin-doza mitatao ireo ahiahiana mahazatra (ny namana sy mpikatroka fantatsika). #Ethiopia
Fanjakan'ny hamehana foana i Ethiopia hatramin'izay. Fampiharana ny fehezan-dalàna fanao mahazatra fotsiny izany. #OromoHetsipanoherana #Ethiopia
Nanontany i Elphas Odegu, olom-pirenena Keniana iray tao amin'ny Facebook :
Nanoratra tao amin'iray amin'ireo bilaogy Ethiopiana tranainy indrindra, Nazret, i Alem Mamo hoe fanjakana mamita-tena ny fitondrana Ethiopiana. Nampitahainy ny zava-misy tao Ethiopia sy Libya tamin'ny fitondran'i Muhammar Gaddafi faramparany:
Niantso ny hamehana ho “fampisehoana mampihomehy” i Mamo, ary nanamarika fa ity no karatra farany ho an'ny Mandam-panafahana ny Vahoaka Tigrayna (TPLF):
Na izany aza, tsy miombon-kevitra tamin'ireo izay miantso ho amin'ny demokrasia tao amin'ny firenena i Abay Rebel raha naneho hevitra tamin'ny lahatsoratra :